ओलीबालाई तड्पाएरै छोड्ने खेल देख्खियो । – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:०५ मा प्रकाशित
ओलीबालाई भन्नेले काँ सेटिङ्ग छ भनेर हल्ला चलाए । तर के गर्नु ? सर्वोच्च अदालत ले फागुन ११ गत्यादिन डङ्गलङ्गै ढाल्यो । ऐले फेरि निर्वाचन आयोगाँ सेटिङ्ग भन्दैछन् । कुनदिन फेरि त्यै आयोगले नि ओलीबालाई उठ्नै नसक्ने गरी अब तिम्रो सूर्य प्रचण्डले लगे भन्देर सरकाराट त उठिबास गराए गराए पार्टीयाटनी उठिबास गराउँछन् कि जस्तो पो भो त । चोलेन्द्रलाई आफ्नो मान्छे भनेर नथाक्नेहरु निर्वाचन
आयोगका थपलियालाई नि ओलीबाकै भन्याछन् । तर कुरो बुझ्दा ह्याँनी ओलीबालाई तड्पाएरै छोड्ने खेल देख्खियो । हुन त ओलीबा नि ज्यान जाय मगर प्रधानमन्त्री नजाय भनेर लाग्नु भाछ । सदनाँ अविश्वासको प्रस्ताब फेस गर्छु भनेर लाग्या देख्दा त अन्तिमसम्म ओलीबाले देशाँ केही न केही गरेरै देखाउँछन् जस्तो छ । कोरोनालाई देखाएर संकट लाउने उपाय नी ओलीबासित सुरक्षित छँदैछ । संकटकाल किन
लाइस् भन्न नमिल्ने होला । त्यसैले प्रचण्डले छिटछिटो प्रधानमन्त्री बन्न वा बनाउन पाभा ओलीलाई खुच्चिङ्ग गर्न पाइन्थ्यो भनेर देख्या सपना नी लम्बिने नै भो जस्तो छ । ओलीबाका साइवर सेनाले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने कुरा गर्नु अनि प्रचण्ड कमरेडले पार्टी फुट्या प्रमाण पेश नगर्नु र त्यै एउटै पार्टीयाट राजनीतिक दोहोरी चल्नुलाई गर्ने हो भने त नेकपा नायक ओली नै भए । अनि प्रचण्डका कुरा कल्ले सुन्ने
भए तनि । त्यसैले प्रचण्ड कमरेड देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी किन बनाइ राख्नुहुन्छ ? तपाईहरले निर्णय गर्न नसक्दा देशाँ अन्यौलता बढ्याबढ्यै भो । तपाइहरलाई देशको चिन्ताभन्दा नी आफ्नै चिन्ताले सतासताइ हुने भो । ओलीबाले ला भनेर दिन नसक्ने तपाईहरुले ले भनेर लिन नी नसक्ने । यस्तो गरेर नि देश र जनता कसरी उमो
लाग्लान् र ? तपाइँ जनता निम्ति राजनीति गर्दैछु भन्नुहुन्छ त नी । तपाइँ कमिनिष्टहरुको लडाइँमा कमिनिष्टलाइ नै भोट दिने जनता मिच्चिने अबस्था आउने हो भने अरुको अबस्था के होला ? के तपाइँहरको लडाइँ दुई बर्षसम्मै चल्ने हो त ? त्यो हो भने त कमिनिष्टको समृद्धिले जनता काँ पुग्ने भए काँ हैन त ? जयहोस कमिनिष्टहरको । – वेदर्षि